Cooking - Torolàlana WoW | WoW Guides
Con ny lakozia hianatra hanamboatra fomba fanamboarana avy amin'ny vazan-tany Azeroth ianao.
Torolàlana mahandro sakafo Zandalari sy Kul tiras - Manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 175
ny Adrian Da Cuna hace 3 taona .
Aloha! Amin'ity torolàlana ho an'ny Zandalari Cuisine sy Kul ity dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 150 dia hampianarinay anao ny mandeha amin'ny làlana ...
Ady ho an'ny torolàlana fandrahoan-tsakafo Azeroth: Lalam-pambolena tsara indrindra
Aloha! Amin'ity torolàlana Cooking in Battle for Azeroth ity dia hasehonay anao ny làlana tsara indrindra hiompiana hena ao amin'ny ...
Cooking amin'ny ady ho an'i Azeroth
Salama daholo. Androany aho mitondra aminao ny vaovao sasany momba ny asan'ny Cooking in Battle for Azeroth. Rehetra…
1-800 Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo
Aloha! Torolàlana momba ny fandrahoan-tsakafo ao Legion izay ampianarinay anao hivoatra amin'ny fomba mora sy haingana indrindra ...
Torolàlana momba ny fandrahoana legiona - Raiso ny fomba fahandro rehetra
Tsara! Amin'ity torolàlana mahandro amin'ny Legion ity dia asehonay anao ny vaovao rehetra momba an'io asa io. Atoro anao koa ny fomba ...
1-600 Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo
Avelako ianao miaraka amin'ny Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo dia miakatra hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 600 amin'ny fanitarana vaovao Mists of Pandaria.
Ny fanananao ny asanao Cooking amin'ny haavo 600 dia mamela anao hanomana sakafo vaovao hahasoa ny tarikao amin'ny fihaonana vaovao. Tokony ho vonona hivezivezy ianao satria amin'ity torolàlana ity dia tsy maintsy mandeha amina mpivarotra marobe ianao hitady ny fomba fahandro azy ankoatry ny fahazoana hena, atody, sns.
Torolàlana amin'ny fandrahoana sakafo amin'ny fahalalahan-tanan'ny mpivahiny
Ny hetsika ny Malala-tanana an'ny Pilgrim Manome antsika ny fahafaha-miavaka amin'ny taona hahazoana mampiakatra ny fahaizana mahandro amin'ny haavo 340. Hanangona fotoana sy vola be izahay.
Na dia mora be aza ny miakatra miaraka amin'ireo resipeo momba ny hetsika, tianay ny hamela anao ity torolàlana kely ity hanamora kokoa ny fizotrany. Raha miakatra avy amin'ny haavo 340 dia aza adino ny anay Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo ary raha tsy te-hamela fomba fahandro ho an'ny asa ianao dia araho ny anay Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo hahazoana azy rehetra.
Andao handeha mahandro!
1-450 Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo
ny Tosundelmarg hace 12 taona .
Ity iray ity Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo Haneho anao ny fomba haingana indrindra hampiakarana ny fahaizanao mahandro amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 450.
Ny fanananao ny asan'ny Cooking amin'ny haavo 450 dia azonao atao ny mahazo volamena tsara mivarotra ireo sakafo azonao atao, ankoatry ny fiomanana amin'ny fivorianao.
Tokony ho vonona hivezivezy ianao satria amin'ity torolàlana ity dia tsy maintsy mandeha amina mpivarotra marobe ianao hitady ny fomba fahandro azy ankoatry ny fahazoana hena, atody, sns.
Azonao atao ny manaraka ny tari-dalan'ny Recipe ao an-dakozia, hahazoana ny fomba fahandro rehetra.
Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo
Avy amin'ny Mofo misy zava-manitra to the Jelly mainty, tsy misy fomba fahandro maizina na hafahafa izay tsy voamariky ny Chef lakozia ny avy tamin'i Azerota. Fa hahazoana izany lohateny izany dia mila mahafantatra ny fomba fahandro isika, lovia 160 hafa farafaharatsiny.
Raha vantany vao mahandro ny fomba fahandro any Outland sy Northrend ianao dia hahazo ny zava-bita: ny Outland Gourmet ary ny Northrend Gourmet.
Ity ny torolàlana azo antoka momba ny fomba fahandro izay azonao atao amin'ny World of Warcraft, aiza ary ahoana no fomba ahazoana azy ireo.